ဂရုမစိုကျပဲမနသေငျ့တဲ့ အိမျမကျ(၅)မြိုး – Focus Myanmar
ဒါပမေယျ့ စိတျပညာရှငျတှကေတော့ ဒီ အိပျမကျတှကေ လကျရှိ ဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနတှေနေဲ့ တိတိကကြ ထငျဟပျနသေလို၊ ဝိုးတဝါး သိမှုဆိုငျရာတှကေ တဈစုံတဈရာ အရေးကွီးတာကို အိပျမကျတှကေနတေဈဆငျ့ အခြိနျနဲ့လိုကျပွီး အသိပေးတာလို့ဆိုပွီး ယူဆကွပါတယျ။
၁။ သှားတှေ ကွှကြေ၊ ဒဏျရာရ၊ သခွေငျးတရား စတာတှနေဲ့ ဆကျစပျ မကျတတျရငျ….
လူတှရေဲ့ မသိစိတျမှာ သှားတှကေို လကျနကျတဈခုလို၊ ခှနျအားကို ဖျောဆောငျပွတဲ့အရာ တဈခုလို၊ ကမ်ဘာကွီးကို တဈပိုငျးတဈစ ကိုကျစုတျနိုငျတဲ့ အစှမျးရှိရာ တဈခုလို စှဲထငျနတေတျတယျလို့ ပနျနေး ပီရစျေ့က ဆိုပါတယျ။ ဒါဟာ သငျ လကျတှဘေ့ဝမှာ အားကိုးရာမဲ့နသေလို၊ တပျပကျြနသေလို ခံစားနရေတာကွောငျ့လို့ ရှငျးပွပါတယျ။
နောကျထပျ ကြှမျးကငျြသူ ပကျထရဈရှာ ဂါဖီးကတော့ သှားတှေ ကြှတျထှကျလာတဲ့ အိပျမကျတှအေကွောငျးကို လူ့ရဲ့ ကှယျလြှိုးနတေဲ့ ဒေါသတှနေဲ့ ဆကျစပျပွပါတယျ။ ဒေါသထှကျလာပွီဆိုရငျ အံကွိတျတတျတာ သဘာဝပါပဲ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ အိပျပြျောနတေဲ့အခါမှာ အံတှကွေိတျပွီး တကြှိကြှိ တကြှတျကြှတျ အသံတှေ ထှကျတာလို့ သူမက ဆိုပါတယျ။ တနညျးအားဖွငျ့ ဒါဟာ မကောငျးတဲ့ ခံစားမှုတှေ အရှိနျမွငျ့လာမယျဆိုတာကို နိမိတျပွနတေယျလို့လညျး ယူဆကွပါတယျ။
နောကျတဈခုကတော့ ကြှနျတျောတို့ အားလုံး ကိုယျ အနီးအနားက တဈစုံတဈယောကျ ဒဏျရာရတာ၊ ဖြားနာတာ၊ ဆုံးပါတာ စတဲ့ မမကျကောငျး မကျတဲ့ အိပျမကျတှေ မကျတတျကွပါတယျ။ ဒီ အိပျမကျတှကွေောငျ့ အံသွတုနျလှုပျမှုတှေ ဖွဈလာစတေယျ။ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ရှုထောငျ့က ကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ အားလုံးက ထငျသလောကျ ဆိုးဝါနတောမြိုးတှေ မရှိပါဘူး။ အနာဂတျဆိုတာရဲ့ အကွောကျတရားတှေ၊ ကိုယျ့ အနားကလူတှမှော ဖွဈတတျတဲ့ ပွောငျးလဲမှုတှေ ဖွဈပကျြတာ စတာတှေ စှဲနတောကွောငျ့လို့ ဆိုပါတယျ။
ကိုယျ သတေယျလို့ ကိုယျ မွငျမကျရငျတော့ တဈခြို့သော သငျ့ရဲ့ တဈစိတျတဈပိုငျးက အတိတျတှထေဲမှာ သဆေုံးပွီး နဈမြောနတောကို အသဈတဈဖနျမှေးဖှားရနျ နရောပေးဖို့ အတှကျ နိမိတျလို့ ကောကျယူလို့ရပါတယျ။
၂။ မသငျ့တျောတဲ့ အဝတျအစားနဲ့ ဖွဈနတော၊ ဗလာကငျြး ဖွဈနတော
သငျ့ အိပျမကျထဲမှာ သငျဟာ မသငျတော့တဲ့ အဝတျအစားကွီးနဲ့ လူဘုံအလယျ ရောကျနတောမြိုး ဝတျလဈ စလဈနဲ့ ဖွဈနတောမြိုး အခွအေနတှေနေဲ့ ဆကျစပျပွီး မွငျမကျရငျ သငျ့ တှကွေုံ့တဲ့ အိပျမကျရဲ့ ခံစားမှုတှအေပျေါမှာ အာရုံစိုကျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ ဒီ အိပျမကျတှကေ စိတျကသိကအောကျဖွဈစရာ၊ တဈခုခုကို ရှကျကွောကျနတော စတာတှကွေောငျ့လညျး မကျတတျပါတယျ။
အလုပျ သဈ၊ အခဈြသဈမှာ အားငယျသလို ခံစားနရေတာ၊ သူမြားတှေ သငျ့ရဲ့ အားနညျးခကျြတှေ၊ ဆိုးတဲ့အခကျြတှကေို သိသှားမှာ စိုးနတောတှကွေောငျ့လို့ အိုငျယနျ ဝဲလဈျေ့ကို ဆိုပါတယျ။
ဒီလိုမှ မဟုတျဘဲ သငျ့က သငျ့အဝတျအစားနဲ့ ပတျသကျပွီး ရှကျကွောကျမနဘေဲ ဂုဏျမွောကျနတေယျဆိုရငျ တဈမြိုး အဓိပ်ပာယျ ကောကျယူလို့ ရပါတယျ။ ဒါ သငျ့စိတျမှာ အသိမှတျပွုခံရမှုတှေ၊ အထငျကွီးလေးစားမှုတှေ လြော့ပါးနသေလို ခံစားနရေတာကွောငျ့သျောလညျးကောငျး၊ တခွားသူတှကေို သငျ့ရဲ့ ပငျကိုအရညျအသှေးတှနေဲ့ တတျမွောကျကြှမျးကငျြမှုတှကေို ပွသခငျြနတောသျောလညျးကောငျး ရှိနလေို့ဖွဈတယျ။
နောကျတဈခုအနနေဲ့ မကွာတော့တဲ့ ကာလတဈခုမှာ ဘဝနဲ့ ပတျသကျပွီး အရေးကွီးတဲ့ အခမျးအနားတဈခု သငျ့မှာ ရှိနမေယျ။ အဲ့ဒီ အခြိနျမှာ အိပျမကျက သငျ (သို့) သငျ့ အသိမိတျဆှတေဈယောကျယောကျက မသငျ့တျောတဲ့ အသှငျအပွငျ၊ အပွငျဆငျနဲ့ ပျေါလာတယျလို့ မကျတယျဆိုရငျ ဒါ အဲ့ဒီ့ပှဲနဲ့ ပတျသကျပွီး သငျ့မှာ သံသယတဈခြို့ ပှားနလေို့ ပါတဲ့…။
အသကျအရှယျ ရလာတာနဲ့ အမြှ လူတှဟော ပြံသနျးတာထကျ ပွုတျကတြာကို ပိုပွီး အိပျမကျမကျတတျကွပါတယျ။ စိတျပညာရှငျ အိုငျယနျ ဝဲလစျေ့ ရဲ့အဆိုအရ၊ ဒီ ပွုတျကတြာကို မကျတဲ့ လက်ခဏာဟာ မထိနျးနိုငျမသိမျးနိုငျ ကှနျထရိုတှမေဲ့ကုနျမှာနဲ့ ပတျသကျတဲ့ အကွောကျတရားကွောငျ့ ဆိုပွီး သိရပါတယျ။
သငျ့ အနနေဲ့ ခြုပျထိနျးဖို့ လိုအပျနတေယျ၊ အားနညျးနတေယျလို့ ခံစားရတဲ့ အပိုငျး ကဏ်ဍတှေ အကွောငျး စဉျးစားသငျ့တယျ။ ပွီးရငျ ဒါတှကေို ဘယျလို ဖွောငျ့မှနျအောငျ လုပျရမလဲဆိုတာလညျး တှေးသငျ့တယျ။
သိပ်ပံပညာရှငျ တဈခြို့ ဒါနဲ့ ပတျသကျလို့ ရှငျးပွထားပုံကတော့ ရှငျးပါတယျ။ အိပျပျြာသှားတဲ့အခါ အာရုံကွောဖှဲ့စညျးမှု စနဈက စတငျပွီး ငွိမျသကျလာပါတယျ။ သှေးပေါငျနဲ့ နှလုံးခုနျနှုနျးလညျး လြော့ကလြာမယျ။ အဲ့ဒီအခါ သငျ့ရဲ့ အိပျစကျနတေဲ့ ဦးနှောကျက ဒီ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ပွောငျးလဲမှုကို အန်တရာယျတဈခုလို့၊ သမေလို ဖွဈသလို မှတျယူပွီး ဒီလိုကွောငျ့နဲ့ သငျ ရုတျတရကျ လနျ့နိုးလာတာမြိုးတှေ ဖွဈစပေါတယျ ဆိုတဲ့အကွောငျး ရှငျးပွထားတာ ရှိပါတယျ။
ဒီလို အိပျမကျနဲ့ ပွောငျးပွနျဖွဈတဲ့ ပြံသနျးရတဲ့ အိပျမကျကတော့ တဈခြို့သော အခကျအခဲတှကေို ဖွတျကြျောလှနျမွောကျလာပွီးနောကျ ပေါ့ပါးခွငျးနဲ့ စိတျတိုငျးကတြဲ့ လှတျလပျမှုကို ရရှိခွငျး စတဲ့ လက်ခဏာတှကေို ဖျောဆောငျပါတယျ။
၄။ လိုကျ အဖမျးခံရတာ၊ နှိပျစကျခံရတာ
ဒီလို အိပျမကျတှမှောတော့ အဓိပ်ပာယျပေါငျးမြားစှာရှိပါတယျ။ စိတျပညာရှငျ လောရီ လိုဝမျဘဂျ ပွောတာကတော့ လူတှဟော ပရိပက်ခတှကေို ရှောငျရှားလိုလရှေိ့ပွီး၊ ကြှဲမွီးတိုတဲ့သူတှေ၊ ပွဿနာရှာတတျတဲ့ သူတှကေို ကွောကျတဲ့ သူတှသော ဒီလို အိပျမကျတှကေို မကျလရှေိ့ကွပါတယျတဲ့…။
ကိုယျ့ကို လိုကျဖမျးတဲ့ အရာကို သတိပွုကွညျ့ပါ..။ ဒါတှကေ လကျတှဘေ့ဝက သငျရဲ့ မသာယာတဲ့ အခွအေနတှေနေဲ့ စိတျမခမျြးသာစရာ ခံစားမှုတှကွေောငျ့ မကျတာလညျး ရှိတတျတယျ။ အကွှေး (သို့) စှဲလနျးမှု တဈစုံတဈရာ၊ စတာတှကွေောငျ့လညျး မကျနိုငျတယျ။
နောကျတဈခုက တဈခြို့သော လူတှေ၊ သငျ့ရဲ့ ဝနျမခံခငျြတဲ့ ပငျကို အကွောငျးအခကျြ တဈခြို့နဲ့ ပတျသကျပွီးလညျး မွငျမကျတတျပါတယျ။
၅။ စာမေးပှဲကတြာ၊ လူ ပရိတျသတျရှေ့ တငျဆကျမှုမှာ မအောငျမွငျတာ
အိပျမကျထဲမှာ စာမေးပှဲဖွနေရေငျး ရုတျတရကျကွီး ဘာကိုမှ မမှတျမိတော့တာ၊ လူအုပျကွီး ရှမှေ့ာ ရပျနခြေိနျ ဘာ စကားတဈလုံးပွောလို့မရတာ စတဲ့ အိပျမကျတှကေို ကြောငျးနအေရှယျ ကလေးကစပွီး ဘှဲ့ရပွီးတာ နှဈခြို့နတေဲ့ အရှယျတှအေထိ မကျလမေ့ကျထရှိကွပါတယျ။ ဒါဟာ သငျ မအိပျခငျ တဈခုခုကွောငျ့နဲ့ သောကမြားသှားတာ၊ တဈစုံတဈရာနဲ့ ပတျသကျပွီး အပွငျးအထနျ ပူပနျနတောတှကွေောငျ့ မကျတာဖွဈပါတယျ။ ဒီ့အတှကျတော့ ခဏတဖွုတျ တနျးဖွုတျပွီး အနားယူတာက အကောငျးဆုံးပါပဲ။
လူတွေဟာ လူဆိုပြီး ဖြစ်တည်လာကြကတည်းက အိပ်မက်တွေရဲ့ဆန်ကြယ်မှုတွေကို ဖွေရှာ ဖော်ထုတ်ချင်ခဲ့ကြတာပါ။ ယနေ့ခေတ်မှာ oneirology လို့ခေါ်တဲ့ အိပ်မက်တွေကို လေ့လာဆည်းပူတဲ့ ပညာရပ်အသစ်လည်းရှိလာခဲ့ပြီ။ ဒါက သိပ္ပံပညာတွေကို လွန်ပြီး ပညာရပ်ဆန်တာတွေကို လေ့လာလိုက်စားတဲ့ သူတွေ၊ အနာဂတ်ကို ခန့်မှန်းနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စိတ်ပညာရှင်တွေကတော့ ဒီ အိပ်မက်တွေက လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ တိတိကျကျ ထင်ဟပ်နေသလို၊ ၀ိုးတ၀ါး သိမှုဆိုင်ရာတွေက တစ်စုံတစ်ရာ အရေးကြီးတာကို အိပ်မက်တွေကနေတစ်ဆင့် အချိန်နဲ့လိုက်ပြီး အသိပေးတာလို့ဆိုပြီး ယူဆကြပါတယ်။
၁။ သွားတွေ ကြွေကျ၊ ဒဏ်ရာရ၊ သေခြင်းတရား စတာတွေနဲ့ ဆက်စပ် မက်တတ်ရင်….
လူတွေရဲ့ မသိစိတ်မှာ သွားတွေကို လက်နက်တစ်ခုလို၊ ခွန်အားကို ဖော်ဆောင်ပြတဲ့အရာ တစ်ခုလို၊ ကမ္ဘာကြီးကို တစ်ပိုင်းတစ်စ ကိုက်စုတ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိရာ တစ်ခုလို စွဲထင်နေတတ်တယ်လို့ ပန်နေး ပီရေစ့်က ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ သင် လက်တွေ့ဘ၀မှာ အားကိုးရာမဲ့နေသလို၊ တပ်ပျက်နေသလို ခံစားနေရတာကြောင့်လို့ ရှင်းပြပါတယ်။
နောက်ထပ် ကျွမ်းကျင်သူ ပက်ထရစ်ရှာ ဂါဖီးကတော့ သွားတွေ ကျွတ်ထွက်လာတဲ့ အိပ်မက်တွေအကြောင်းကို လူ့ရဲ့ ကွယ်လျှိုးနေတဲ့ ဒေါသတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြပါတယ်။ ဒေါသထွက်လာပြီဆိုရင် အံကြိတ်တတ်တာ သဘာဝပါပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့် အိပ်ပျော်နေတဲ့အခါမှာ အံတွေကြိတ်ပြီး တကျွိကျွိ တကျွတ်ကျွတ် အသံတွေ ထွက်တာလို့ သူမက ဆိုပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ဒါဟာ မကောင်းတဲ့ ခံစားမှုတွေ အရှိန်မြင့်လာမယ်ဆိုတာကို နိမိတ်ပြနေတယ်လို့လည်း ယူဆကြပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ကိုယ် အနီးအနားက တစ်စုံတစ်ယောက် ဒဏ်ရာရတာ၊ ဖျားနာတာ၊ ဆုံးပါတာ စတဲ့ မမက်ကောင်း မက်တဲ့ အိပ်မက်တွေ မက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီ အိပ်မက်တွေကြောင့် အံသြတုန်လှုပ်မှုတွေ ဖြစ်လာစေတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှုထောင့်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အားလုံးက ထင်သလောက် ဆိုးဝါနေတာမျိုးတွေ မရှိပါဘူး။ အနာဂတ်ဆိုတာရဲ့ အကြောက်တရားတွေ၊ ကိုယ့် အနားကလူတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပျက်တာ စတာတွေ စွဲနေတာကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကိုယ် သေတယ်လို့ ကိုယ် မြင်မက်ရင်တော့ တစ်ချို့သော သင့်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းက အတိတ်တွေထဲမှာ သေဆုံးပြီး နစ်မျောနေတာကို အသစ်တစ်ဖန်မွေးဖွားရန် နေရာပေးဖို့ အတွက် နိမိတ်လို့ ကောက်ယူလို့ရပါတယ်။
၂။ မသင့်တော်တဲ့ အ၀တ်အစားနဲ့ ဖြစ်နေတာ၊ ဗလာကျင်း ဖြစ်နေတာ
သင့် အိပ်မက်ထဲမှာ သင်ဟာ မသင်တော့တဲ့ အ၀တ်အစားကြီးနဲ့ လူဘုံအလယ် ရောက်နေတာမျိုး ၀တ်လစ် စလစ်နဲ့ ဖြစ်နေတာမျိုး အခြေအနေတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး မြင်မက်ရင် သင့် တွေ့ကြုံတဲ့ အိပ်မက်ရဲ့ ခံစားမှုတွေအပေါ်မှာ အာရုံစိုက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီ အိပ်မက်တွေက စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စရာ၊ တစ်ခုခုကို ရှက်ကြောက်နေတာ စတာတွေကြောင့်လည်း မက်တတ်ပါတယ်။
အလုပ် သစ်၊ အချစ်သစ်မှာ အားငယ်သလို ခံစားနေရတာ၊ သူများတွေ သင့်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေ၊ ဆိုးတဲ့အချက်တွေကို သိသွားမှာ စိုးနေတာတွေကြောင့်လို့ အိုင်ယန် ၀ဲလေစ့််ကို ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ သင့်က သင့်အ၀တ်အစားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှက်ကြောက်မနေဘဲ ဂုဏ်မြောက်နေတယ်ဆိုရင် တစ်မျိုး အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူလို့ ရပါတယ်။ ဒါ သင့်စိတ်မှာ အသိမှတ်ပြုခံရမှုတွေ၊ အထင်ကြီးလေးစားမှုတွေ လျော့ပါးနေသလို ခံစားနေရတာကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ တခြားသူတွေကို သင့်ရဲ့ ပင်ကိုအရည်အသွေးတွေနဲ့ တတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ပြသချင်နေတာသော်လည်းကောင်း ရှိနေလို့ဖြစ်တယ်။
နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ မကြာတော့တဲ့ ကာလတစ်ခုမှာ ဘ၀နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီးတဲ့ အခမ်းအနားတစ်ခု သင့်မှာ ရှိနေမယ်။ အဲ့ဒီ အချိန်မှာ အိပ်မက်က သင် (သို့) သင့် အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ယောက်က မသင့်တော်တဲ့ အသွင်အပြင်၊ အပြင်ဆင်နဲ့ ပေါ်လာတယ်လို့ မက်တယ်ဆိုရင် ဒါ အဲ့ဒီ့ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင့်မှာ သံသယတစ်ချို့ ပွားနေလို့ ပါတဲ့…။
အသက်အရွယ် ရလာတာနဲ့ အမျှ လူတွေဟာ ပျံသန်းတာထက် ပြုတ်ကျတာကို ပိုပြီး အိပ်မက်မက်တတ်ကြပါတယ်။ စိတ်ပညာရှင် အိုင်ယန် ၀ဲလေ့စ် ရဲ့အဆိုအရ၊ ဒီ ပြုတ်ကျတာကို မက်တဲ့ လက္ခဏာဟာ မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင် ကွန်ထရိုတွေမဲ့ကုန်မှာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောက်တရားကြောင့် ဆိုပြီး သိရပါတယ်။
သင့် အနေနဲ့ ချုပ်ထိန်းဖို့ လိုအပ်နေတယ်၊ အားနည်းနေတယ်လို့ ခံစားရတဲ့ အပိုင်း ကဏ္ဍတွေ အကြောင်း စဉ်းစားသင့်တယ်။ ပြီးရင် ဒါတွေကို ဘယ်လို ဖြောင့်မှန်အောင် လုပ်ရမလဲဆိုတာလည်း တွေးသင့်တယ်။
သိပ္ပံပညာရှင် တစ်ချို့ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှင်းပြထားပုံကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အိပ်ပျာ်သွားတဲ့အခါ အာရုံကြောဖွဲ့စည်းမှု စနစ်က စတင်ပြီး ငြိမ်သက်လာပါတယ်။ သွေးပေါင်နဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းလည်း လျော့ကျလာမယ်။ အဲ့ဒီအခါ သင့်ရဲ့ အိပ်စက်နေတဲ့ ဦးနှောက်က ဒီ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုကို အန္တရာယ်တစ်ခုလို့၊ သေမလို ဖြစ်သလို မှတ်ယူပြီး ဒီလိုကြောင့်နဲ့ သင် ရုတ်တရက် လန့်နိုးလာတာမျိုးတွေ ဖြစ်စေပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ရှင်းပြထားတာ ရှိပါတယ်။
ဒီလို အိပ်မက်နဲ့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့ ပျံသန်းရတဲ့ အိပ်မက်ကတော့ တစ်ချို့သော အခက်အခဲတွေကို ဖြတ်ကျော်လွန်မြောက်လာပြီးနောက် ပေါ့ပါးခြင်းနဲ့ စိတ်တိုင်းကျတဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ရရှိခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ဖော်ဆောင်ပါတယ်။
၄။ လိုက် အဖမ်းခံရတာ၊ နှိပ်စက်ခံရတာ
ဒီလို အိပ်မက်တွေမှာတော့ အဓိပ္ပာယ်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ စိတ်ပညာရှင် လောရီ လိုဝမ်ဘဂ် ပြောတာကတော့ လူတွေဟာ ပရိပက္ခတွေကို ရှောင်ရှားလိုလေ့ရှိပြီး၊ ကျွဲမြီးတိုတဲ့သူတွေ၊ ပြဿနာရှာတတ်တဲ့ သူတွေကို ကြောက်တဲ့ သူတွေသာ ဒီလို အိပ်မက်တွေကို မက်လေ့ရှိကြပါတယ်တဲ့…။
ကိုယ့်ကို လိုက်ဖမ်းတဲ့ အရာကို သတိပြုကြည့်ပါ..။ ဒါတွေက လက်တွေ့ဘ၀က သင်ရဲ့ မသာယာတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ စိတ်မချမ်းသာစရာ ခံစားမှုတွေကြောင့် မက်တာလည်း ရှိတတ်တယ်။ အကြွေး (သို့) စွဲလန်းမှု တစ်စုံတစ်ရာ၊ စတာတွေကြောင့်လည်း မက်နိုင်တယ်။
နောက်တစ်ခုက တစ်ချို့သော လူတွေ၊ သင့်ရဲ့ ၀န်မခံချင်တဲ့ ပင်ကို အကြောင်းအချက် တစ်ချို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း မြင်မက်တတ်ပါတယ်။
၅။ စာမေးပွဲကျတာ၊ လူ ပရိတ်သတ်ရှေ့ တင်ဆက်မှုမှာ မအောင်မြင်တာ
အိပ်မက်ထဲမှာ စာမေးပွဲဖြေနေရင်း ရုတ်တရက်ကြီး ဘာကိုမှ မမှတ်မိတော့တာ၊ လူအုပ်ကြီး ရှေ့မှာ ရပ်နေချိန် ဘာ စကားတစ်လုံးပြောလို့မရတာ စတဲ့ အိပ်မက်တွေကို ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးကစပြီး ဘွဲ့ရပြီးတာ နှစ်ချို့နေတဲ့ အရွယ်တွေအထိ မက်လေ့မက်ထရှိကြပါတယ်။ ဒါဟာ သင် မအိပ်ခင် တစ်ခုခုကြောင့်နဲ့ သောကများသွားတာ၊ တစ်စုံတစ်ရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြင်းအထန် ပူပန်နေတာတွေကြောင့် မက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက်တော့ ခဏတဖြုတ် တန်းဖြုတ်ပြီး အနားယူတာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
မဲဆှယျစညျးရုံးရေးမှတဈဆငျ့ ရောဂါကူးစကျမှုမဖွဈစရေေး ရှေးကောကျပှဲလလေ့ာစောငျ့ကွညျ့သူမြား အကွံပွု